ဦးသိန်းစိန် ကျန်းမာရေး မကောင်း၊ ရန်ကုန်တွင် အနားယူနေ – President not feeling well | MoeMaKa Burmese News & Media
ဦးသိန်းစိန် ကျန်းမာရေး မကောင်း၊ ရန်ကုန်တွင် အနားယူနေ – President not feeling well
မကြာသေးခင် လများအတွင်း စင်္ကာပူတွင် နှလုံးခုန်စက် သွားရောက် တပ်ဆင်ခဲ့ရသော ဦးသိန်းစိန်
သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် စစ်တပ်ဆရာဝန်တဦးအား ရန်ကုန်မြို့နေအိမ်သို့ ခေါ်ယူကာ ကုသမှု ခံယူပြီးနောက် အနားယူနေသည်ဟု သိရသည်။
အစိုးရအရာရှိများက ဦးသိန်းစိန် နေထိုင်မကောင်းကြောင်း၊ ရန်ကုန်အိမ်တွင် အနားယူနေကြောင်း အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
လုပ်ငန်းတာဝန်များပြားသဖြင့် ပင်ပန်းပြီး ကျန်းမာရေးထိခိုက်သွားပုံရသည်ဟု ၎င်းတို့က ဆိုသည်။
အသက် ၆၇ နှစ်အရွယ် ဦးသိန်းစိန်သည် နှလုံးရောဂါရှိသူဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းက စင်္ကာပူသို့ သွားရောက်ပြီး နှလုံးခုန်စက် တပ်ဆင်ခဲ့ရသေးသည်။
ဦးသိန်းစိန်သည် ၂၀၁၁ မတ်လ သမ္မတအာဏာရယူပြီးနောက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ဆောင်မှုကို စောင့်ကြည့်နေသော နိုင်ငံတကာကလည်း သူ့အား ချီးကျူးခဲ့ကြသည်။
ကိုးကား – AP သတင်းဌာန
15 Responses to ဦးသိန်းစိန် ကျန်းမာရေး မကောင်း၊ ရန်ကုန်တွင် အနားယူနေ – President not feeling well
*U AYE on May 18, 2012 at 1:51 pm
I AM SURE ALL MYANMAR PEOPLE WISH THE PRESIDENT TO REBUILD GOOD HEALTH SOON POSSIBLE. IT’S QUITE DIFFERENT WISH TO 8-DIGITS. PRESENT AND FUTURE MILITARY LEADERS SHOULD LEARN THE LESSON FROM THIS TWO. WE WRITE OUR OWN HISTORY ACCORDING TO OUR WORKDONE.
ko naing on May 18, 2012 at 8:42 pm
Best wishes to get recover Mr president!!
အင်ကြင်းမွှေး on May 18, 2012 at 9:35 pm
သမ္မတကြီး ကျန်မားရေး အမြန်ကောင်းပါစေ သမ္မတကြီး ကျန်းမာမှရမယ် စိတ်မလျော့နဲ့ အားတင်းထား သမ္မတကြီး
ရဲ့လုပ်ရပ်တွေမှန်ကန်လို့ မြန်မာပြည်မှာ မက ကမ္ဘာ ကတောင်
စိန်မြင့် on May 18, 2012 at 10:00 pm
yawna on May 18, 2012 at 9:37 pm
ကိုနိုင် on May 18, 2012 at 10:08 pm
မြန်မာ့အုပ်ချုပ်မှုသမိုင်းမှာ သမ္မတဦးသိန်စိန်ဟာ အသန့်ရှင်းဆုံး အတော်ဆုံး နဲ့ အကောင်းဆုံး
susan on May 18, 2012 at 10:29 pm
ye ye on May 19, 2012 at 3:55 am
the best president of the world.
နှင်းမောင် on May 19, 2012 at 6:13 am
ချစ်လှစွာသော သမတကြီး အမြန်ကျန်းမာပါစေ
Among* on May 19, 2012 at 6:25 am
Best among worst..
At the moment -main actor of Than Shwe’s democracy movie..
ုkochitpe07 on May 19, 2012 at 9:35 am
မောင်တ on May 19, 2012 at 10:36 am
တပြည်လုံးက တိုင်စာတွေ ဖတ်နေရတာ အရမ်းသနားဖိုကောင်းပါတယ် နားလဲပေးကြပေါ့
အဘ ပြည်သူတွေပိုသတဲ မစ်တာကြောင့် အမြန်ကျမ်းမာပါစေ လို
abc on May 19, 2012 at 1:59 pm
mg mg soe on May 19, 2012 at 2:56 pm
Nai Kyaw Sein on May 19, 2012 at 10:19 pm
တိုင်းပြည်နဲ.လူမျိုးအတွက်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်သော ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဦးသိန်းစိန်မှလွဲပြီး ကြံ့ဖွတ်ပါတီမှာ မတွေ.သေး။ ဦးသိန်းစိန် အမြန်ကျန်းမာပါစေ ။နေပူတော်မှာ သမတ စိတ်ပင်ပန်းမှုများတယ် ရွှေတိဂုံစေတီရှိတဲ့ရန်ကုန်မှာ အနားယူတာ အလွန်ကောင်းပါတယ် ။စိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီး အမြန်နေကောင်းပါစေလို. အားလုံးနဲ.အတူတကွ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။